သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့၌ lockdown ၁၀၆ ရက် ဆောင်ရွက်အပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသောနေ့အဖြစ် စတင်ကြေညာ - Xinhua News Agency
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်စနီမြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူများအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆစ်ဒနီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ် (NSW)ပြည်နယ်၏မြို့တော် ဆစ်ဒနီ၌ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် ၎င်းတို့၏ lockdown ကာလပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံများအနေဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မျှော်လင့်စောင့်စားနေရသော “လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိသည့်နေ့” သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် ညသန်းခေါင်ယံတွင် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် lockdown စည်းကမ်းချက်များ တရားဝင်အဆုံးသတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလက်လီအရောင်းဆိုင်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကာ ဒေသခံသြစတြေးလျနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် နံနက် အစောပိုင်းကပင် ဆံပင်ညှပ်ရန် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသလို၊ ၂၄ နာရီ ဖွင့်လှစ်သည့် လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် အားကစားခန်းမများသို့ သွားခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က ဘားတစ်ခု၌ ကျင်းပသောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ် ၏အသစ်ခန့်အပ်ထားသော ဝန်ကြီးချုပ် Dominic Perrottet ကကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေလျှော့ခြင်းကို ပြည်နယ်အတွင်း လွတ်လပ်ခွင့်စတင်ရရှိသောနေ့ အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီနေ့ကို ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ခွင့်ရကြတဲ့နေ့အဖြစ် ပြောချင်တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကိုလည်းပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“စိန်ခေါ်မှု တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်က ပြည်သူ တွေအားလုံးကို လေးစားမှု တွေ၊ အကြင်နာတရားတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူစိတ်နဲ့ ဆောင်ရွက် ကြဖို့ ကျွန်တော်ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။”ဟုလည်း ၎င်းကပြောခဲ့သည်၊
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဖြင့် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း(lockdown) အား အတိတ်ကာလ၏ အရာတစ်ခု အဖြစ်သာ ကျန်ရစ် စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယနေ့အထိ နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ်အတွင်း အသက် ၁၆ နှစ်အထက် လူဦးရေ၏ ၇၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၉၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး ၁ ကြိမ်ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပြည်နယ် ၌ အောက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီ မှ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် ည ၈နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း ဒေသတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာသစ် ၄၉၆ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၈ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်ဖြစ်သော ဗစ်တိုရီးယား ပြည်နယ်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် သန်းခေါင်ယံအချိန်အထိ ၂၄ နာရီအတွင်း အတည်ပြုလူနာသစ် ၁,၆၁၂ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၈ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Australia’s Sydney announces “Freedom Day” after 106 days in lockdown
SYDNEY, Oct. 11 (Xinhua) — As Sydney, capital of the Australian state of New South Wales (NSW), exited its 106-day lockdown Sunday, residents have re-emerged to celebratealong-awaited “Freedom Day”.
As some lockdown restrictions officially ended at midnight on Sunday and non-essential retail re-opened their doors, local Australians have lined up to get haircuts, visited 24-hour retail stores, and headed to the gym since the early hours of the morning.
Speaking atapress conference held atabar on Monday, newly instated Premier of NSW Dominic Perrottet referred to the easing of restrictions as the state’s “Freedom Day”.
“I see it asaday of freedom. It isaFreedom Day, it is. Businesses are opening up. But that means it needs to be done inameasured and safe way,” he said.
“There are going to be challenges, we know that. I ask again everybody right across our state to treat everybody with kindness and respect, and take personal responsibility,” said Perrottet.
He said vaccinations would make lockdownsathing of the past.
At present NSW’s vaccination rate sits at 73.5 percent of the over-16 population having received both doses, and 90.3 percent having received at least one dose.
At the same time, NSW recorded 496 new locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8:00 p.m. Sunday night, and eight deaths in the same period.
The neighboring state of Victoria recorded 1,612 new locally acquired cases in the 24 hours to midnight Sunday and recordedafurther eight deaths. Enditem
Photo-People walk in Sydney, Australia, Aug. 26, 2021.(Photo by Hu Jingchen/Xinhua)
ဗန်နာတူနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု စတင်